Chakwasa ihie: Email Marketing na Delivra | Martech Zone
Chakwasa ihie: Email Marketing na Delivra
Fraịde, Ọktọba 28, 2011 Fraịde, Ọktọba 28, 2011 Douglas Karr
Obi dị anyị ụtọ na Delivra dị ka email ahịa onye nkwado Martech. E nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa email na oghere… ebe ụfọdụ n'ime ha nwere ngwaọrụ ọkaibe, ọtụtụ n'ime ha na-adabere na omume ndị na-eme ihe ike ma na-agbagha site na ndị ahịa dịka ndị nzuzu. Delivra anọwo na gburugburu kemgbe ọbịbịa ahịa email ma tolite site n'ịrụsi ọrụ ike iji nyere ndị ahịa ya aka…. na nsonaazụ na-egosi!
Delivra na-bụ Inc 5000 ụlọ ọrụ na ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji rụọ ọrụ na Indiana! Ha etolite 98% na afọ 3 gara aga ma bụrụkwa otu ịtụnanya nke ndị mmadụ na-echebara ọganiihu nke ndị ahịa ha anya. N'ime afọ iri m bi na Indianapolis, anụghị m ihe ọ bụla mana nnukwu ihe gbasara ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ha.
Site na ibe weebụ ha:
Delivra bụ enweghị ụgwọ, nke nwere ma na-arụ ọrụ nke dị na etiti Midwest - yana ụkpụrụ ụlọ nke ịkwụwa aka ọtọ, iguzosi ike n'ihe na ịrụsi ọrụ ike metụtara nzukọ ahụ. Nke a pụtara na anyị anaghị ahụ otu ndị ahịa ma ọ bụ ndị na-ere ahịa: anyị nwere ike ime ihe kachasị mma maka ndị ahịa anyị na ndị ọrụ anyị na-enweghị otu "akara-ala" nrụgide dị n'ọtụtụ ndị asọmpi anyị.
Lọ ọrụ ndị ọzọ na-ekwu maka ọrụ ndị ahịa - na Delivra anyị gafere ọrụ egbugbere ọnụ. A haziri nzukọ ahụ dum site na ala na ndị ahịa n'uche. Ozugbo i mebere akaụntụ na Delivra, ị ga - amalite mmekọrịta gị na onye ị tụkwasịrị obi nke lekwasịrị anya ka ọ dị mma. Gaghị akpọ n’ime ụlọ ọrụ ịkpọ oku nke ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ gafere ọtụtụ ekwentị iji gwa onye na-amaghị gị: ị ga-ama aha onye ị ga-akpọ na onye ahụ ga-ama nke gi!
Ekele dịrị ndị enyi anyị 12 Kpakpando Media maka vidiyo ọzọ dị ịtụnanya na-egosipụta ụlọ ọrụ Teknụzụ Ahịa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụlọ ọrụ gị gbaa ajụjụ ọnụ ma ọ bụ chọọ ịnye vidiyo nke gị, biko kpọtụrụ anyị!
Mgbe Ọdachi Mere!